Hery - Tsiky dia ampy | Febroary 2011 |
Blaogy com: voatra farany
2011-02-01 @ 23:44 in Blaogy Dev
UPDATE: (Jereo ery ambany fa ampiako ihany ity lahatsoratra ity mandra-pilamin'ny blaogy)
Nohavaozina hampiasa ny voatra farany (version 1.2.11) amin'ny lifetype ny blaogy.com. Ho an'izay tsy mahalala moa dia ilay fitaovana hoe LifeType no mamelona ity blaogy.com ity hatramin'ny voalohany. Misy ny fanovana vitsivitsy izay nataoko mba hampifanaraka azy amin'ny serasera. Mety hisy olana tsindraindray vokatr'izao fampiakarana azy amin'ny voatra vaovao izao koa lazao ihany raha toa sendra mahita ianareo.
Raha ny tokony ho izy dia tsy miova intsony ny daty rehefa ahitsy ny lahatsoratra.
Tokony malakilaky kokoa ihany koa. Mampiasa "memcached" indray mantsy amin'ny fitantanana ny hafainganana.
Mandeha tsra koa ny fampidirana sary
Tokony efa ho tafiditra daholo amin'ny solonanarana sy tenimiafina ampiasainy ao amin'ny serasera.org ny tsirairay.
Efa mandeha toy ny teo aloha koa ny emoticons
Raha misy fanontaniana mivantana dia ao amin'ny http://karajia.org aho